नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा जापानमा बैशाखी मेलाको आयोजना गरिने ! – ebaglung.com
नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा जापानमा बैशाखी मेलाको आयोजना गरिने !
२०७३ फाल्गुन १२, बिहीबार २१:२४	Top News, थप समाचार
काठमाडौ, २०७३ फागुन १२ । नेपाली नयाँ वर्षको अवसर पारेर आगामि अप्रिल ८ र ९ तारिख( अर्थात् चैत २६ र २७) गते जापानको तेन्जिन सेन्ट्रल पार्क फुकुओका जापानमा सातौं बैशाखी मेला हुने भएको छ । फुकुओका नेपाल सोसाइटी, पर्यटन पत्रकार संघ(जाट–नेपाल) नेपाल पर्यटन बोर्डमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी मेलाको बारेमा जानकारी दिएको हो । फुकुओका नेपाल सोसाइटी, क्युसु नेपाल फ्रेन्डसिप, एनआरएन क्युसु जापानको संयुक्त आयोजनामा उक्त मेला आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिईयो ।
घुस लिदै गरेको अवस्थामा मालपोतका नायब सुब्बा पक्राउ !